के कोरोना संक्रमणमुक्त भइसकेका व्यक्तिको ‘टूथब्रश’मा भाइरस रहिरहन्छ? – Health Post Nepal
२०७८ माघ ८ गते १४:२९
काठमाडौं – नेपाललगायत विश्वभर अहिले कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिइरहेको छ। तर, पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा यस पटक संक्रमणले गम्भीर बनाउने र मृत्युदरमा कमी देखिएको छ। यसो भनिरहँदा खतरा सकिएको भन्ने होइन। विज्ञहरूले अझै कोरोना संक्रमणको खतरा बाँकी रहेको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा मास्क, सामाजिक दूरीको पालना गर्न र खोपको पूर्ण मात्रा लगाउन उनीहरुले आग्रह गरिरहेका छन्।
यसबीच सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर कोरोनाभाइरसबाट निको भइसकेका व्यक्तिहरूले टूथब्रश फेर्नुपर्ने नत्र अझ संक्रमण हुनसक्ने भन्ने खालका पोस्टहरु आइरहेका छन्। भाइरस टूथब्रशमा टाँसिने भएकाले फेर्नुपर्ने बताइएको छ। तर, संक्रमणमुक्त भइसकेका व्यक्तिले टूथब्रश फेर्न आवश्यक छ त?
एम्सका डाक्टर अभिनव सिंघलले यो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको बताए। उनले संक्रमण निको भइसकेपछि दाँत माझ्ने ब्रस र जिब्रो सफा गर्ने उपकरण प्रयोग नगर्नु वा फ्याँकिनु निराधार भएको बताए। ‘बिरामीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि ब्रसमा कोरोना रहन्छ भन्नुमा कुनै सत्यता छैन।’, उनले भने। तर, जब व्यक्ति संक्रमित अवस्थामै रहन्छ त्यतिखेर भने उसको ब्रस घरका अन्य सदस्यसँग भने राख्न नहुने उनले बताए। ‘यसले अन्यलाई संक्रमणको जोखिम हुनसक्छ।’, उनले भने।
यस्तै दिल्लीको फोर्टिस हेल्थकेयरका आइसियु प्रमुख डा. शैलेन्द्र भदौरिया भन्छन्, ‘जब कोरोनाभाइरस हाम्रो कोशिकामा प्रवेश गरिसकेको छ भने यो टूथब्रशमा हुनु वा नहुनुले अर्थ राख्दैन। त्यसै पनि कोरोनाभाइरस निर्जीव सतहहरूमा लामो समयसम्म बाँच्दैन। निको भइसकेपछि टूथब्रशमा कोरोना भाइरस हुन्छ भन्नु बिल्कुलै गलत हो। यदि तपाईंको ब्रश धेरै पुरानो भइसकेको छ भने चाँही अवश्य बदल्नुस्।’